Norway oo dooneysa in Waalidka loo kordhiyo Fasaxa Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo dooneysa in Waalidka loo kordhiyo Fasaxa
Norway oo dooneysa in Waalidka loo kordhiyo Fasaxa
March 17, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Wasiirka Kjell Ingolf Ropstad wuxuu doonayaa inuu kordhiyo fasaxa aabaha ee dhalashada cunugga ka dib, in la kordhiyo fasaxa waalidka, meeshana laga saaro qeybta saddexda ah.
“Inaad hesho fursad badan oo aad ku doorato naftaada – haddii ay noqon karto inaad waqti yar ku qaadato dhalmada ama aad qaadan karto 50 ama 60% oo aad ku darsato kuna darto waxbarasho ama shaqo – waxaan u maleyneynaa inay taasi tahay waxa qoysaska ay rabaan, ”ayuu yiri hogaamiyaha Christian Dimuqraadiga Kjell Ingolf Ropstad oo u waramay warbaahinta dalka Norway ee NBC
Ropstad, oo sidoo kale ah Wasiirka Carruurta iyo Qoysaska, ayaa hadda taageersan in la beddelo dhowr fasax waalidnimo.
Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah, inuu doonayo inuu kordhiyo fasaxa aabbanimada dhalashada ka dib oo laga dhigo labo illaa saddex toddobaad isla markaana loo kordhiyo fasaxa waalidka afar toddobaad oo leh 100% mushahar ah iyo shan toddobaad oo leh 80% mushahar.
Intaas waxaa sii dheer, wuxuu rabaa inuu ka laabto sedexda qaybood si qoysasku u yeeshaan awood dheeri ah oo ay ku go’aansadaan waxa iyaga ku habboon. Toban usbuuc aabayaasha.